Consulate General of India, Sittwe, Myanmar : Press Releases
Handing-over Ceremony of Tractors, Crawler Harvesters and Computers to Rakhine State Government by Government of India
Posted on: June 13, 2019 | Back | Print
Handing-over Ceremony for donation of Tractors, Crawler Harvesters and Computers to Rakhine State Government by Government of India
On 13 June 2019, the Embassy of India, Yangon and Consulate General of India, Sittwe organizedaformal handing over ceremony for donation of Tractors, Harvesters and Computers to Rakine State Government in the presence of Ambassador of India H.E. Shri Saurabh Kumar and Honorable Chief Minister of Rakhine State, H.E U Nyi Pu. The others present on the occasion included Cabinet Ministers of Rakhine State Government, Principal of Sittwe Computer University, members of Peasant Union, Consul General and officials of the Embassy.
It is recalled that the Embassy of India and the State Government of Rakhine had signed two separate MoUs on 12 September 2018.
One of the MoUs was between Ministry of Agriculture, Livestock, Forestry & Minerals (R.S.G.) and Embassy of India, Yangon. On the request by the Rakhine State Government, the Government of India has provided 15 Tractors and 15 Crawler Harvesters to the Rakhine State Government towards uplifting the lives of the peasants in the region, as Rakhine isapredominantly agricultural based economy. The assistance provided would promote agricultural mechanization in the state.
The other MoU was between Department of Social Affairs (R.S.G.) and Embassy of India, Yangon under which India assisted the Sittwe Computer University by providing 40 Computers with associated peripherals. This move would usher computer literacy among the youth in the Rakhine State and further equip them with employment opportunities in the software sector.
The Government of India is committed toastrong development assistance partnership with the Government of the Republic of the Union of Myanmar. Recognizing the special challenges in and needs of Rakhine State, where equitable development of all sections of the State's inhabitants is key to building social harmony, peace and prosperity, India and Myanmar have separately entered into an agreement on the Rakhine State Development Programme, under which India is providing US$ 25 million in grant assistance overaperiod of five years. This assistance is dedicated to projects in Rakhine State, the first of which isapilot project to build 250 prefabricated houses in Northern Rakhine for displaced persons.
The two countries are cooperating closely to develop more projects that can be executed under the aegis of Rakhine State Development Programme.
အိန္ဒိယနိုင်ငံအစိုးရမှ လှူဒါန်းသော လယ်ထွန်စက်များ၊စပါးရိတ်သိမ်းစက်များ င့် ကွန်ပျူတာများအား ရခိုင်
အိန္ဒိယနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Shri Saurabh Kumar နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးညီပု တို့တက်ရောက်သော ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရသို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံအစိုးရမှလှူဒါန်းသည့် လယ်ထွန်စက်များ ၊ စပါးရိတ်သိမ်းစက်များနှင့် ကွန်ပျူတာများ လွှဲပြောင်းပေးအပ်သော အခမ်းအနားအား ၂၀၁၉ခုနှစ် ဇွန်လ (၁၃) ရက်နေ့တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံသံရုံး ၊ ရန်ကုန်မြို့နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံး၊ စစ်တွေမြို့တို့မှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအခမ်းအနားသို့ ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများ၊ စစ်တွေကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ကျောင်းအုပ်ကြီး၊ တောင်သူလယ်သမား သမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်များ၊ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်နှင့် သံရုံးအရာရှိများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံသံရုံးနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တို့သည် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (၂)ရပ်အား ၂၀၁၈ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၁၂) ရက်နေ့တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါသည်။ ထိုနားလည်မှုစာချွန်လွှာများထဲမှ တစ်ခုမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရ၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ သစ်တောနှင့် သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံသံရုံး၊ ရန်ကုန်မြို့တို့အကြား လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်သည် အဓိကအားဖြင့်စိုက်ပျိုးရေးအားအခြေခံသော စီးပွားရေး ဖြစ်သည်နှင့်အညီ ဒေသအတွင်းရှိလယ်သမားတို့၏ လူနေမှုဘ၀များမြှင့်တင်ပေးရန်အတွက် ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရ၏ မေတ္တာရပ်ခံချက်အရ အိန္ဒိယနိုင်ငံအစိုးရသည် ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရသို့ လယ်ထွန်စက် (၁၅)စီးနှင့်စပါးရိတ်သိမ်းစက် (၁၅) စီးထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယခုကဲ့သို့ပေးပို့သောအကူအညီ ဖြင့်ပြည်နယ်အတွင်း စက်မှုလယ်ယာကူးပြောင်းခြင်းအား မြှင့်တင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
အခြားသောနားလည်မှုစာချွန်လွှာမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရ၊ လူမှုရေးဌာနနှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံသံရုံး၊ ရန်ကုန်မြို့ တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ထိုနားလည်မှုစာချွန်လွှာအရ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ စစ်တွေကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်သို့ ကွန်ပျူတာအလုံး (၄၀)နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ကူညီထောက်ပံ့မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ထောက်ပံ့မှုသည် ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းရှိလူငယ်များ အားကွန်ပျူတာပညာရပ်များသင်ယူနိုင်ရန် အားပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ရေရှည်တွင်ဆော့ဖ်ဝဲကဏ္ဍ၌ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိစေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံအစိုးရသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အကူအညီပေးရေး အတွက်ခိုင်မာသော မိတ်ဖက်နိုင်ငံဖြစ်ရန် ကတိက၀တ်ပြုပါသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းအထူးစိန်ခေါ်မှုများနှင့်လိုအပ်ချက် များဖြစ်သော ပြည်နယ်အတွင်းနေထိုင်သူများအတွက် ကဏ္ဍစုံတွင်ညီမျှစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်မှာ လူမှုအသိုက်အ၀န်းအတွင်း လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မှု၊ ငြိမ်းချမ်းမှုနှင့်ကြွယ်ဝမှုတို့သည် အဓိကဖြစ်ကြောင်းသတိပြုမိသောကြောင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ နှင့်မြန်မာနိုင်ငံတို့သည် ရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအစီအစဉ်အတွက် သီးခြားသဘောတူညီချက်ရခဲ့ပါသည်။ ထိုအစီ အစဉ်အရ အိန္ဒိယနိုင်ငံသည် ငါးနှစ်တာကာလအတွင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၅) သန်း ကူညီထောက်ပံ့မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအထောက်အပံ့သည် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစီမံကိန်းများအတွက် ရည်ညွှန်းသတ်မှတ်ပြီး ပထမတစ်ခုမှာ အသင့်ထုတ် လုပ်ပြီး အစိတ်အပိုင်းများဖြင့် ဆောက်လုပ်သောအိမ်ပေါင်း (၂၅၀)အား ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိ နေရပ်စွန့်ခွာ သူများအတွက် ဆောက်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့နှစ်နိုင်ငံသည် ရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအစီအစဉ်အရ ထောက်ပံ့မှုဖြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်သော နောက်ထပ်စီမံကိန်းများအတွက် နီးကပ်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။
၂၀၁၉ခုနှစ် ဇွန်လ (၁၃)ရက်-------
The 12th issue of SSIFS' Quarterly Newsletter Videsh Sewa for the period October-December 2021
Measures taken by Government of India to fight COVID-19
3rd issue of FSI's Quarterly Newsletter Videsh Sewa
Handing-over Ceremony of 250 pre-fabricated houses to the Government of Myanmar
PRESS RELEASE 12 September, 2018
State Mourning to be observed in memory of former Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee.
Opening of International Entry-Exit Checkpoints between Myanmar and India
Visitors: 2170087 | Page last updated on: 04-05-2022